निर्मला हत्याकाण्डबारे एसपी डिल्लीराज विष्टका छोराले मुख खोले ! हेर्नुहोस पत्रसहित — Sanchar Kendra
निर्मला हत्याकाण्डबारे एसपी डिल्लीराज विष्टका छोराले मुख खोले ! हेर्नुहोस पत्रसहित
निर्मला पन्त हत्याकाण्डको अनुसन्धान अवधिभरका लागि निलम्बनमा परेका कञ्चनपुरका तत्कालीन एसपी डिल्लीराज विष्टका छोराले आफूलाई निर्मला हत्याकाण्डमा जोडेकोमा आपत्ति जनाएका छन् ।
विष्टका छोराले लिखित रुपमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै भनेका छन्, ‘‘कल्पना नै नगरेको निन्दनीय र घृणित कार्यमा एसपी विष्टको छोराको संलग्नता भएको भनी सामाजिक सञ्जाल तथा सञ्चारमाध्यममा प्रचारप्रसार भएको कुरा निराधार, तथ्यहिन, भ्रामक समाचार प्रेषण गरी व्यक्तिगत चरित्रहत्या गर्न खोजिएकोले आधिकारिकता पुष्टि नभई प्रमाणबिना प्रसारण नगर्न अनुरोध गर्दछु ।’’
‘‘निर्मला पन्त बहिनीले न्याय पाउनुपर्छ, असली अपराधीले सजाय पाउनुर्छ । यसका लागि अनुसन्धान प्रक्रियामा म सघाउन तयार छु र म निर्दोष भएको प्रमाण पनि दिन सक्छु,’’ उनले लेखेका छन् । उनले आफूले बम दिदीबहिनी र मेयरका भतिजालाई नचिनेको पनि दाबी गरेका छन् ।
बिना कमजोरी आफूले मानसिक यातना खेप्नुपरेको भन्दै उनले सामाजिक सञ्जालमा अनावश्यक कुरा लेख्नेहरुलाई छानविन गरी कारबाहीको मागसमेत गरेका छन् ।
निर्मलाको बलात्कारपछि हत्या प्रकरणमा एसपी विष्टका छोरा र भीमदत्त नगरपालिकाका प्रमुख सुरेन्द्र विष्टका भतिजा लाई समेत स्थानीयले शंकाको घेरामा राखेका छन्। दुई दिदी बहिनी मात्र बस्ने गरेको घरमा नगर प्रमुख विष्टका भतिजा र एसपी विष्टका छोराको बाक्लो आवतजावत हुने गरेको स्थानीयको भनाइपछि दुवै जना शंकाको घेरामा परेका हुन् ।
तत्कालीन एसपी विष्टले आफ्नो छोरालाई बचाउन नाटकीय रूपमा नक्कली हत्यारा पक्राउ गरेको भन्दै स्थानीयले आन्दोलन चर्काएका थिए। सो क्रममा एक जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने धेरै जना घाइते भएका छन् ।
प्रहरीले यसअघि निर्मला हत्यामा संलग्न भएको भन्दै ४१ वर्षीय दिलिपसिंह विष्टलाई पक्राउ गरेको थियो । मानसिक अवस्था ठीक नभएका दिलिपलाई पक्राउ गरी वास्तविक हत्यारालाई बचाउन खाजेको आरोप स्थानीयले लगाउँदै आएका छन् । १० साउनमा निर्मलाको बलात्कारपछि हत्या भएको थियो ।